Ugaas Maxamed: W. M/toyada (FaaraxTabas) Soomaali waxuu ka galay Qiyaano Qaran | KEYDMEDIA ONLINE
Ugaas Maxamed: W. M/toyada (FaaraxTabas) Soomaali waxuu ka galay Qiyaano Qaran
Muqdisho (KON) - Ogaas Maxamed Wali , Cumar Buraale iyo Cuqaal kale oo ka soo jeeda Gobolada Jubooyinka kana hadlayay arimo la xiriira Heshiiska ay la galeen wafdi ka socda Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka KMG ah Jubba ayaa waxaay sheegeen in Heshiiskaasi yahay mid aan la aqbali Karin oo Qiyaamenayo Qaranimada Soomaaliyeed.
Ogaaskaoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay tahay waxa lala yaabo in Xubnoo sare sare ee ka tirsan Dowladda Soomaaliya ay heshiis la galaan Maamulka KMG ah islamarkaana Ciidankii Dowladda Soomaaliya lagu amro in ay hubka iska dhigaan una hogaasamaan amarka Maamulka KMG ah ee Juba oo xili hore Colaadi dhexmartay.
Ogaas Maxamed Wali ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in marna taasi aan la aqbali Karin waxuuna xusay in ay aad uga wal walsan yihiin waxa ka dhalankara arintaan. Ciidanka Dawladda Soomaaliya Hubka ha dhigaan, gacnaha kur ahu taagaan Dabadeedna Kismaayo wey soo gali karaan oo u Dagaal Oge A/Madoobe Madaxa ka wada jaro ma ahan mid ay Soomaali qaadan karto!!!
Waa Qiyaamo qaran mida u maleegay W/asiirka M/toyada Faarax C/qadir (Tabas), ula jeedkiisuna waxuu ahaa mida hada taagan oo ha inuu huriyo Colaad Sokeeye, sidaas waxaa yiri mid ka mid ah Cuqaasha Goobta ka hadashay oo la soo jeeda Gobolada Jubooyinka.